Ogaden News Agency (ONA) – Dagaal Xoogan oo CWXO iyo Ciidamada Gumaysiga ku Dhex Maray Duleedka Shilaabo
Dagaal Xoogan oo CWXO iyo Ciidamada Gumaysiga ku Dhex Maray Duleedka Shilaabo
Gudoomiyaha Hogaanka Gaashaandhiga JWXO oo warbixin kooban siiyay Wakaaladda Wararka Ogadenya ONA ayaa ka waramay dagaal culus oo shalay ku dhex maray N/hurayaasha CWXO iyo maxaysatada gumaysiga Itobiya ee ku sugnaa rugtaa. Dagaalkan ayaa ka dhacay meel aan ka fogayn magaalada Shilaabo oo dhanka Waqooyi Bari kaga aadan.
Dagaalkan oo CWXO ay kusoo qaadeen ciidan gumaysiga oo halkaa dhigay ayaa waxaa laga dilay 10 askari oo maydkoodii ay kaga carareen goobta, halka uu dhaawaca gaarayay dhowr iyo toban. Wuxuu intaa ku daray Hogaanka in hub iyo rasaasba laga furtay ciidankii maxaysatada ahaa.
Waxaa sidoo kale ka socday tuulooyinka Shilaabo hoostaga dagaal culus oo u dhexeeyay maxaysatada Hawaarinta oo gacan ka helayay ciidamada Itobiya iyo dadweynihii deegaanka Lababaar oo qiyaastii Shilaabo u jira 95km xaga Koonfureed. Dagaalkan ayaa waxaa sabab u ahaa dadkii deegaanka oo diiday inay ka bixiyaan Canshur xoolaha nool ee ka cabaya ceelasha.
Dagaaladaa ayaa maxaysatada Hawaarinta waxaa lagu xabaalay tuulada 24 la helay maydkooda iyadoo dhaawacooda uu gaarayay 48. Ka dib waxaa soo galay dagaalada ciidanka military ga oo gaadiid wata, waxaana laga dilay 4. Waxaana laga dhaawacay 9.
Dadkii shacabka ahaa ee daganaa tuulooyinkaa ayaa dhibaata badan ay u gaysteen ciidamada gumaysiga Itobiya iyagoo dhaawacooda ay ka xidheen xadka Somaliya in loosii qaado. Wararka ka imanaya goobaha ay dagaalada ka dhaceen ayaa sheegaya in dadka shacabka ah ee xoola-dhaqatada ah dhibaato aad u xoogan ay u gaysteen ciidankii Itobiya iyo maxaysatada Hawaarinta.